Ma ii sheegi kartaa talooyinka muhiimka ah ee muhiimka ah SEO?
Nasiib darro, ma jiraan xal caalami ah ama talooyinka guud ee muhiimka ah ee SEO ah si aad u sameysid nuxurkaaga si wacan u dhawaaqa oo waligiisna aan dib loo dhigin. Xaqiiq ahaan, ka dib mar kasta oo cusbooneysiin ah ee soo noqnoqonaya qaabka raadinta ee Google, waxaa jira waxyaabo kala duwan oo ku jira baaritaannada muhiimka ah ee u muuqda in ay la qabsadaan qaababkaas dib loo eegay qiimeynta darajada mar labaad. Halkan waxaa ah shanta ugu muhiimsan ee muhiimka ah ee SEO-ga ee muhiimka ah si aad u ilaaliso waxyaabaha aad si fiican u qabatid oo had iyo jeer ugu dambeyn.
Isku dheelitir dheelitirka dhererka ereyga muhiimka ah
Guud ahaan, ereyada muhiimka ah waxaa loo isticmaali karaa mid ahaan fudud iyo gaaban (e. g. , ereyada muhiimka ah ee ugu muhiimsan) ama loogu talagalay ereyada muhiimka ah ee dheeraadka ah ee keenaya saddex ama kabadanba (e. g. , keywords ugu fiican ee blog my SEO). Waxaan u jeedaa halkan waa inaad ka heshaa dheelitir caafimaad leh adigoo isticmaalaya labada nooc ee keywords keywords. Halkan waa sheeko. Marka hore, ereyga madaxa (kelmadaha kelmadaha ah) ayaa inta badan la kulma tartan aad u fiiqan. Iyadoo la tixgelinayo ereyada muhiimka ah ee dheeraadka ah, waxaa jira tartan aad u jilicsan oo ku saabsan iyaga, laakiin waxaa la geliyaa su'aalaha raadinta sida badan. Taasina waa sababta ugu fiican ee halkan ay si fiican u fahmi karto dhagaystayaashaaga oo markaa adoo isticmaalaya ereyada muhiimka ah ee dheeriga ah ee loo isticmaali doono si hubaal ah.
Tayo tifaftiran ayaa weli ah arin jilicsan
In kasta oo qaar ka mid ah ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee SEO ay sheegi karaan in ay sameeyaan, marnaba tagaan cufnaanta ugu sareysa ee goolka koowaad. Sameynta waxyaabahaaga ku qasbay ereyada muhiimka ah, waxaad yeelan doontaa qoraalladaada badankoodu waxay u muuqdaan kuwo aan fiicnayn ama aan fiicneyn. Natiijada, tayadaada tayada waxay u badan tahay in ay noqoto mid si dhib leh loo akhrisan karo, markaa adigoo sharraxaya tayadaada. Ha iloobin waqtiyadii hore, markii Google liiska ay inta badan ku tiirsan yihiin farsamoyinka farsamada ee SEO. Hadda algorithm search wuxuu aqoonsanayaa waxyaabaha tayada leh ee qibrad u leh waayo-aragnimada dadka isticmaala qaab kasta oo farsamo. Sidaa darteed, waad fiicnaan lahayd inaad ku tiraahdo cufnaanta muhiimka ah hal mar iyo dhammaanba.
Ku dheji diiradda saxda ah ee baahidaada macaamiisha
Marnaba xooggaagin dadaalkaaga ku wajahan dhinac kasta oo teknoolajiyadeed ee SEO, ugu yaraan ka shaqeynta waxyaabahaaga. Xasuuso oo kaliya - waxaad samaynaysaa tayo tayo leh akhristayaasha dhabta ah, ma aha mashiinada. Waxaan u jeedaa halkan in shay kasta oo qoraaga ah loogu talagalay inuu u adeego dhagaystayaasha aad beegsaneyso. Iyo haddii aadan qiyaasi karin macaamiisha iman kara inay raadiyaan ereyada muhiimka ah ee aad u taagan tahay, waxaad ka fiicnaan laheyd inaad heshid kuwa cusub. Kaliya diirada saari lahaanshaha tayada, sababtoo ah hadda waxaa lagu siin karaa darajo sare oo ku haboon, maaha erayo muhiim ah oo la fahmi karo.
Inuu kordho liistada aad ku leedahay ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah
Tani waa mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee muhiimka ah ee SEO loogu talagalay maanta. Waxyaabahani waa in inta badan naga mid ah in la bartilmaameed badan yahay, sidaas darteed waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale leedahay dib-u-eegis ku saabsan ereyada muhiimka ah ee hadda. Kaliya ka takhalus ereyada kuwaas oo si dabiici ah u lumiya inta jeer ee isticmaalka. Haddii aadan kalsooni ku qabin waxa laga saari lahaa, waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho mid ka mid ah qalabka furan ee loo adeegsado qiimeynta ereyada muhiimka ah. Sida aniga ahaan, waxaan ka helay Google Qorshaha Keydka Keliya ee ugu mudan. Laakiin xulashada qalabka saxda ah waa uun adiga. Inta badan, badankoodu waxay isla shaqeeyaan isla sidaas Source .